Georginio Wijnaldum Oo Markii Ugu Horreysay Ka Hadlay Dalabkii Barcelona & Xaqiiqooyinkii Qarsoonaa - Gool24.Net
Georginio Wijnaldum Oo Markii Ugu Horreysay Ka Hadlay Dalabkii Barcelona & Xaqiiqooyinkii Qarsoonaa
Laacibka khadka dhexe uga ciyaara Liverpool ee Georginio Wijnaldum ayaa ka hadlay wararkii ku xidhiidhinayay Barcelona ee sheegayay inuu kusii jeeday Camp Nou ka hor intii aanu xidhmin suuqa iibka ciyaartoyda Isniintii.
Kubbad-sameeyahan oo heshiiskiisa Liverpool hal sano oo kali ka hadhsan yahay ayaa la sheegayay inuu doonayo inuu tababare Ronald Koeman kula biiro Barcelona, laakiin laacibkan ayaa ugu dambayntii wax walba caddeeyey.
Georginio Wijnaldum waxa uu sheegay in xiisaha ka imanayay Barcelona aanu mid dhab ah ahayn, laakiin uu ka war hayay, waxaanu yidhi: “Uma malaynayo inuu ahaa dalab dhab ah. Haddii kale, waxaad heli lahaydeen macluumaad intaa ka badan ama wax baa dhici lahaa.”
Xiddiga reer Netherlands waxa kale oo uu sheegay in sida hadda muuqata uu mustaqbalkiisu yaallo Liverpoool, isaga oo soo qaaday qandaraaskiisa oo 10 bilood oo kali ka hadhsan tahay, waxaanu yidhi: “Muu jirin wax dhab ah, sida hadda muuqata, waxaanan joogi doonaa Livedrpool.
“Qandaraaskaygu wuxuu sii shaqaynayaa 10 bilood oo kale, waanay isbeddeli karaan. Waligaa ma ogaan kartid waxa dhacaya kubadda cagta, balse waynu arki doonaa wax dhaca.”
Georginio Wijnaldum ayaa udub-dhexaad u ahaa Liverpool guushii ay gaadheen xili ciyaareedkii hore ee ay hanteen Premier League iyo sidoo kale Champions League oo ay ku guuleysteen sannadkii kasii horreeyey.
Kulankii soo kabashada ahaa ee Liverpool ay 4-0 kaga adkaatay Barcelona semi-finalkii Champions League ayuu Georginio Wijnaldum ayaa ninkii ku suntanaa guusha ee labada gool dhaliyey qaybtii dambe, waxaanay Reds doonaysaa inay sii haysato inkasta oo wali aanay isla gaadhin go’aan buuxa oo mustaqbalkiisa ku aaddan.